2 Ndị Eze 20 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Eze nke Abụọ 20:1-21
Hezekaya rịara ọrịa ma gbakee (1-11)
Eze Babịlọn zitere ndị bịara hụ Hezekaya (12-19)
Hezekaya nwụrụ (20, 21)
20 N’oge ahụ, Hezekaya rịawara ọrịa, nọrọkwa n’ọnụ ọnwụ.+ Aịzaya onye amụma bụ́ nwa Emọz wee bịa gwa ya, sị: “Jehova sịrị, ‘Gwa ndị ezinụlọ gị ihe ha ga-eme ma ị nwụọ, n’ihi na ị gaghị agbake. Ị ga-anwụ.’”+ 2 N’ihi ya, Hezekaya chere ihu n’ahụ́ ụlọ, bido ịrịọ Jehova, sị: 3 “Jehova, biko, ana m arịọ gị ka i cheta otú m si jiri obi m niile na-eso gị mgbe niile, na otú m si mee ihe dị mma n’anya gị.”+ Hezekaya bewere ákwá, na-ebesi ya ike. 4 Mgbe Aịzaya na-erubeghị n’etiti mbara èzí eze, Jehova gwara ya, sị:+ 5 “Laghachi, gwa Hezekaya, bụ́ onye na-edu ndị m, sị, ‘Jehova, bụ́ Chineke Devid nna nna gị, sịrị: “Anụla m ekpere gị. Ahụla m anya mmiri gị.+ M ga-agwọ gị.+ Nwanne echi,* ị ga-aga n’ụlọ Jehova.+ 6 M ga-eme ka ị dịkwuo ndụ afọ iri na ise. M ga-anapụta ma gị ma obodo a n’aka eze Asiria.+ M ga-echebekwa obodo a n’ihi aha m nakwa n’ihi Devid ohu m.”’”+ 7 Aịzaya wee sị: “Wetanụ mkpụrụ fig kpọrọ nkụ a kpụrụ akpụ.” Ha wee weta ya, tụkwasị ya n’etuto toro ya, Hezekaya ejiri nwayọọ nwayọọ gbakee.+ 8 Hezekaya jụburu Aịzaya, sị: “Olee ihe ga-egosi+ na Jehova ga-agwọ m nakwa na m ga-aga n’ụlọ Jehova nwanne echi?”* 9 Aịzaya asị: “Jehova ga-eme ihe ga-egosi gị na ọ ga-eme ihe o kwuru. Jehova kwuru, sị: ‘Ị̀ chọrọ ka onyinyo jiri nzọụkwụ iri gaa ihu n’elu ebe e si arịgo n’ụlọ,* ka ị̀ chọrọ ka o jiri nzọụkwụ iri laa azụ?’”+ 10 Hezekaya asị: “Ọ dị mfe ime ka onyinyo jiri nzọụkwụ iri gaa ihu, ma ọ dịghị mfe ime ka o jiri nzọụkwụ iri laa azụ.” 11 N’ihi ya, Aịzaya onye amụma kpọkuru Jehova, ya emee ka onyinyo dị n’elu ebe e si arịgo n’ụlọ Ehaz laa azụ nzọụkwụ iri.+ 12 N’oge ahụ, eze Babịlọn, bụ́ Birodak-baladan nwa Baladan, ziteere Hezekaya akwụkwọ ozi na onyinye maka na ọ nụrụ na Hezekaya rịara ọrịa.+ 13 Hezekaya nabatara ndị wetara ihe ndị ahụ.* O gosikwara ha ụlọ e dowere akụ̀ ya niile,+ ma ọlaọcha ma ọlaedo ma mmanụ balsam ma mmanụ ndị ọzọ dị oké ọnụ ma ngwá agha ya nakwa ihe niile dị ebe a na-edowe akụ̀ ya. O nweghị ihe Hezekaya na-egosighị ha n’ụlọ* ya nakwa n’ebe niile ọ na-achị. 14 Mgbe e mechara, Aịzaya onye amụma bịakwutere Eze Hezekaya ma jụọ ya, sị: “Gịnị ka ndị a bịaranụ kwuru? Ebeekwa ka ha si bịa?” Hezekaya asị: “Ha si ebe dị anya bịa, ha si Babịlọn.”+ 15 Aịzaya jụziri ya, sị: “Gịnị ka ha hụrụ n’ụlọ* gị?” Hezekaya asị: “Ha hụrụ ihe niile dị n’ụlọ m. O nweghị ihe ọ bụla dị n’ebe m na-edowe akụ̀ nke m na-egosighị ha.” 16 Aịzaya asị Hezekaya: “Nụrụ ihe Jehova kwuru,+ 17 ‘Oge na-abịa mgbe a ga-abịa buru ihe niile dị n’ụlọ* gị nakwa ihe niile nna nna gị hà kpakọtara ruo taa laa Babịlọn.+ O nweghị ihe ga-afọdụ.” Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. 18 ‘A ga-akpọrọkwa+ ụfọdụ n’ime ụmụ ndị nwoke ị ga-amụ, ha aghọọ ndị na-eje ozi n’obí eze Babịlọn.’”+ 19 Hezekaya asị Aịzaya: “Ihe Jehova kwuru, nke ị gwara m, dị mma.”+ Ọ sịkwara: “Ọ dị mma ma ọ bụrụ na udo ga-adị, obi eruokwa onye ọ bụla ala* n’oge niile m dị ndụ.”*+ 20 E dere akụkọ ndị ọzọ gbasara Hezekaya, ike niile ọ kpara, otú o si rụọ ọdọ mmiri,+ waa okpo mmiri ma mee ka mmiri bata n’obodo ya,+ n’akwụkwọ e dere ihe ndị mere n’oge ndị eze Juda. 21 Hezekaya mechara nwụọ otú nna nna ya hà+ nwụrụ. Manase+ nwa ya nọchiri ya, malite ịchị.+
^ Na Hibru, “N’ụbọchị nke atọ.”
^ O nwere ike ịbụ na a na-eji ebe e si arịgo n’ụlọ agụ oge otú e si eji onyinyo agụ oge ma anwụ chawa.
^ Ma ọ bụ “gere ndị wetara ihe ndị ahụ ntị.”
^ Ma ọ bụ “ma ọ bụrụ na udo na eziokwu ga-adị.”
^ Na Hibru, “n’ụbọchị m.”
2 Ndị Eze 20